Miezaha Hana-namana | Tanora
1. Mifantoha amin’ny toetra tsaranao sy ny fahaizanao. (2 Korintianina 11:6) Marina fa tsara ny mahatsapa hoe manao fahadisoana ianao. Raha miaiky anefa ianao hoe be dia be koa ny zavatra hainao sy ny toetra tsaranao, dia hatoky tena kokoa ianao ka tsy hanambany tena loatra ary tsy hanirery intsony. Mieritrereta hoe ‘inona avy ny toetra tsarako sy ny zavatra haiko?’
2. Miezaha manatona ny hafa. Olona vitsivitsy ihany aloha iresahana. Hoy i Nary: ‘Anontanio fotsiny ny fahasalamany na hoe nanao ahoana ny tany am-piasany dia ho fantatrao bebe kokoa izy.’
Toy ny hoe manisy tetezana eo amin’ilay hantsana ianao, raha mitady vahaolana mba hahazoana namana
Soso-kevitra: Tsy ny olona mitovy taona aminao ihany no tokony hiresahanao. Milaza ny Baiboly fa mpinamana tsy nifankafoy i Rota sy Naomy, Davida sy Jonatana, ary Timoty sy Paoly. (Rota 1:16, 17; 1 Samoela 18:1; 1 Korintianina 4:17) Nifanalavitra be anefa ny taonan’izy ireo. Tadidio koa fa tsy voatery ho ianao foana no hiresaka, fa mba manan-kolazaina koa ny olon-kafa. Ny namana mahay mihaino rahateo no tian’ny olona. Raha saro-kenatra àry ianao, dia tadidio hoe tsy voatery hiteny foana.
3. Aza toherina foana izay lazain’ny olona. (1 Petera 3:8) Avelao izy hiteny, na tsy mitovy hevitra aminy aza ianao. Tadiavo izay hevitra itovianareo, ary izany no resaho. Raha tsy maintsy manohitra ny heviny kosa ianao, dia miezaha halemy fanahy sy hahay handanjalanja.
Soso-kevitra: Tianao ve raha tsara fanahy ny olona rehefa miresaka aminao? Miezaha koa àry ho toy izany aminy. Hihatakatahan’ny olona ianao, raha tia mifamaly na mananihany tsy amin’ny antony, na tia manambany na manome tsiny. Ho tian’izy ireo kosa ianao raha ‘teny mahafinaritra foana no lazainao.’—Kolosianina 4:6.
Mahatsiaro ho manirery ve ianao? Fenoy ity, dia ho hitanao hoe nahoana ianao no manirery ary inona no azonao atao.
Manana ny fiheverantsika ny olon-kafa daholo isika. Ahoana no mba fiheveran’ny olona anao?